रोचक Archives – Kalika News
चैत्र २१, चीनको शेन्ज़ेन शहरमा कुकुर बिरालोको मासु उपभोग माथि प्रतिबन्धको निर्णय संगै चीनले कोरोना भाइरस को बिरामीको उपचारको लागि भालु हरुको पित्त प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । चीनमा भालुहरुको पित्तमा हुने एसिडको प्रयोग पथरी र आन्द्राको बिमारीहरुको उपचारको लागि चिनिया औषधिको रुपमा गरिएको हुन्छन । तर भालुहरुको पित्त कोरोनाको उपचारमा फलदायी हुने कुनै प्रमाण छैन । ऐनिमल एशिया फ़ाउंडेशन नामक संस्थाको प्रवक्ता ब्रायन डेलीले समाचार एजेंसी एएफ़पी लाइ भन्छन -,”...
धादिङ गजुरी, चैत्र, १४ । बिहिबार नेपालको आकाशमा राति अनौठो बस्तु देखिएको छ । आगोको ज्वाला जस्तो उक्त बस्तु पश्चिम नेपालको आकाशमा देखिएको बताइएको छ । यस्तो बस्तु आकाशमा देखिएपछि सामाजिक सञ्जालभरी तस्बिर राखिएको छ । उक्त बस्तु आकाशमा उत्तरपूर्वबाट दक्षिण पश्चिमतर्फ गएको जनाइएको छ ।गजुरीको स्थानियका अनुसार आकाशमा ज्वाला जस्तो बस्तु आवाज निकाल्दै गएको बताइएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालभरी आकाशमा अचम्मको बस्तु देखिएको भन्दै तस्बिर शेयर गरिएको छ । ...
चैत्र ११ कालिका , सुनिल पराजुली यतिबेला बिश्वभरी कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को संक्रमण फैलीरहेको छ । दिन प्रतिदिन भाईरसले बिकराल रुप लिदै महामारी बढाईरहेको छ । नेपालमा पनि (कोभिड १९) को त्रास बढ्दो छ भने फाट्ट फुट्ट यसको संक्रमित पनि भेटिन थालेको छ । देशमा संक्रमण नफैलियोस भनेर सरकारले बिभिन्न निर्णयहरु गर्दे आएको छ ।यसबिचमा संक्रमण नफैलियोस भनेर सरकारले मंगलबार बिहान ६ः०० बजेबाट लागु हुने गरी एक साताको लागि देशैभर...
अल्सर कस्तो रोग हो ? यो कसरि थाहा पाउने ?
पछिल्लो समय ब्यस्तता लगाएत सानो सानो हेलचेक्राई कारण कारण मानिसहरु समयमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको छ । धेरै जसो अहिले मनिषहरुलाई ग्यास्टिकको समस्या बढ्दो छ । समयमा खाना नखानु, खाली पेटमा बढि चिल्लो पदार्थ खानु, ड्राई फुड जस्ता लगाएका कारण मानिसहरुमा ग्यास्टिककाको समस्या बढेको छ । सजका कारण आमसयको सानो आन्द्रमा घाउ बन्न सक्छ । सोही घाउबाट भएको प्वाल लाई अल्सर भनिन्छ । अल्सर बिशेष गरी ग्यास्टिकको कारण नै हुने...
गर्मी बढ्दैछ : यसबाट बच्न अपनाउनु् यी उपाएहरु
पछिल्लो समय नेपालमा गर्मी बढ्दो छ । गर्मी मौसममा बिभिन्न कीसीमको रोग संगसंगै शरिरमा इनर्जी कम हुने गर्छ । गर्मी समयमा हुने चर्को घाम तथा तापक्रमबाट मानिसहरुलाई बिभिन्न समस्या निस्किएको हुन्छ । त्यसैले आज हामी तपाईहरुलाई गर्मीको प्रकोपबाट बचाउन सकिने बिभिन्न उपाएका बारेमा जानकारी दिन गईरहेका छौं । १. पसिना सोस्ने किसिमका नरम खालको सुती सकेसम्म सेता रंगको कपडा लगाउने । २. भुटेको, तारेको वा मसलेदार खानेकुराबाट टाढा रहने अन्यथा यस्ता...
योगा गर्दा ५ मिनेट लामो श्वास लिनुस हुन्छ फाईदा
श्वासप्रश्वास एउटा अनियन्त्रित प्रक्रिया हो । श्वास फेर्न हामीलाई कुनै थप उर्जा खर्च गर्नुपर्दैन । तर, राम्रोसँग श्वासप्रश्वास लिएमा यसले स्वास्थ मात्र बनाउँदैन मानिसलाई दीर्घजीवि पनि बनाउँछ । बिहान ५ मिनेट जति लामो श्वास लिने छाड्ने गर्नुपर्छ । यसरी गरिने श्वासप्रश्वास व्यायायमका केही फाइदा यस प्रकार छन्ः तनाबमुक्त बनाउछः गहिरो श्वासले शरिरमा अक्सिजनको प्रबाह बढाउछ र तनाब, चिन्ता र त्रास घटाउँछ । शरिरको बिष फालिदिन्छः श्वासप्रश्वासबाट मानिसको शरिरबाट ७० प्रतिशत भन्दा...
दुनियामा घर पालुवा जन्तु जनावरहरु धेरै क्युट अनि माया लाग्दा हुन्छ । जस्लाई हामीलाई देख्दै माया लाग्छ । सोहि मध्ये बिरालो पनि एकदमै राम्रा अनि माया लाग्दा हुन्छन् । कहि कतै कालो रंगको बिरालो हुन्छ । कालो भएपनि त्यसमा क्युटनेस चाहि देखिन्छन् । तर आज हामी तपाईहरुलाई यस्तो बिरालोको बारेमा जनाकारी दिन गईरहेका छौं । जो माया लाग्दो भनाई डरलाइदो रहेको छ । स्विजरल्याण्डको रुटीमा एक ४७ वर्षकी सान्ड्राले उक्त बिरालोलाई...
मोटोपन कम गर्ने तरिकाहरु : यसरि कम गर्नुस पेटको मोटोपन
१. पेटको मोटोपन कम गर्ने सजिलो तरिका पछिल्लो समय पेटमा बढीरहने बोसोका कारण हरकोही पनि चिन्तित बनिरहेका छन् । बेली वोसो सबैभन्दा खतरनाक प्रकारको मोटोपन हो । यसले तपाईको नजरलाई मात्र क्षति पुर्याउँदैन बढ्दो मोटोपन तपाईंमा धेरै रोगहरूको चिन्ह समेत हो । वजन घटाउने एक ढिलो प्रक्रिया हुन सक्छ, तर केहि गति र अभ्यासहरू प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । २.मोटापन बाट मधुमेह ह’न सक्छ । सहि खानेकुराह जति महत्त्वपुर्ण छ, उतिनै महत्त्वपुर्ण छ...
डन्डिफोरले हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् समाधा गर्ने उपाय
बिशेषगरी किशोाराबस्था लागे पछि युवा युवतीहरुमा डन्डिफोरको समस्या बढ्दै गएको हुन्छ । र त्यती बेला उनिहरु लाई यो समस्याले एकदमै सताईरहेको हुन्छ । डन्डिफोर छालाको एक समस्या हो । त्यसैले डन्डिफोर आउन नदिन सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ । यदि डन्डिफोर आईहाले पनि यसलाई कम गर्ने घरेलु तरिकाहरु पनि हुन्छ । डन्डिफोरको समस्या हुनेले अनुहारलाई दिनको दुई–तीनपटक राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ । यदि अनुहार सफा भयो भने अनुहारका कोषहरूमा ऊर्जा पुग्छ ।आफ्नो छाला...
यस कारण देखिन्छ छालामा निलो दाग
हाम्रो शरीरमा धेरै किसिमका रोग लाग्न सक्छन् । पुरातन समाजमा एउटा अन्धविश्वास छ, शरीरमा अचानक निलो दाग देखिए, बोक्सीले टोकेको भनिन्छ । यस्तो दाग अनायसै देखापर्छ । कुनै बाहिरी कारण हुँदैन । न चोटपटक हुन्छ, न अरु केही । राती सग्लो सुतेको व्यक्तिको शरीरमा अचानक दाग देखिन्छ । खासमा के हो यो दाग रु के यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ ? किन बस्छ निलो दाग ? छालको कुनै भागमा चोट लाग्दा रक्त...